Bluepha သည် Round B ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ ရရှိ ခဲ့သည် - Pandaily
Bluepha သည် Round B ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ ရရှိ ခဲ့သည်
Jan 10, 2022, 16:35ညနေ 2022/01/10 23:47:33 Pandaily
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဒြပ် ဇီဝဗေဒ ကုမ္ပဏီ Bluepha ကယနေ့ ကြေငြာ ခဲ့သည်B3 ငွေကြေး ပြီးစီး ခဲ့သည်Round B ရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်း ကို ယွမ် ၁. ၅ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၃၅ သန်း) အထိ ယူဆောင် လာ ပါ။
Bluepha ‘s B3 Round ကို Genesis Capital, China State Enterprise Hybrid Operation Reform Fund (Hybrid Reform Fund) ၊ Zhongping Capital, Jiangsu Huanghai Financial Holding Group, Central China Blue Ocean Investment Management Company တို့က ပူးတွဲ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့ပြီး လက်ရှိ ရှယ်ယာရှင် များဖြစ်သော FreesFund Capital, Country Garden Ventures Capital, GL Ventures Capital နှင့် Trinity Innovation Fund တို့က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခဲ့သည်။
ယခင်က အပြာရောင် ချစ်ပ် သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ နှင့် သြဂုတ်လတွင် B1 နှင့် B2 စုစုပေါင်း ယွမ်သန်း ၇၀၀ နီးပါး ရရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာ B ကို အလှည့်ကျ ရန်ပုံငွေ များ biodegradable ပစ္စည်းများ PHA အကြီးစား ထုတ်လုပ်မှု စက်ရုံ များ ၏ဆောက်လုပ်ရေး နှင့် စစ်ဆင်ရေး, စက်မှု 4.0 ဒြပ် ဇီဝဗေဒ R & D ပလက်ဖောင်း SynBio_OS ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့် ဖြန့် ဖြူး, နှင့် အသစ် ပြန်လည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ, အင်ဂျင်နီယာ probiotics နှင့် အခြား ထုတ်ကုန် ပိုက်လိုင်း များ၏ R & D နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု အတွက်အသုံးပြု လိမ့်မည်ဟု အစီရင်ခံ ထားသည်။
Bluepha ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ပီကင်း တက္ကသိုလ်မှ Dr. Zhang Haoqian နှင့် Tsinghua တက္ကသိုလ်မှ Dr. Li Teng တို့က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒြပ် ဇီဝ နည်းပညာ အပေါ် အခြေခံ၍ မော်လီကျူး နှင့် ပစ္စည်း ဆန်းသစ်တီထွင် မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဇီဝ အခြေခံ မော်လီကျူး များနှင့် ပစ္စည်းများ အသစ် ကိုဒီဇိုင်းဆွဲ ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုး ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ရောင်းချ ခြင်းအတွက် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် Blue Fa ၏ပထမဆုံး ထုတ်ကုန် ပိုက်လိုင်း-နှစ်စဉ် တန်ချိန် ၂၅၀၀၀ တန် ဆွေးမြေ့ ပျက်စီး နိုင်သည့် PHA ထုတ်လုပ်သည့် စူပါ စက်ရုံကို Jiangsu ပြည်နယ်၊ Yancheng City, Binhai ကောင်တီ တွင် တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Lightspeed China Partners သည်ဒေါ်လာ ၉ ၂၀ သန်း ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့သည်
Bluepha ထိုကဲ့သို့သော strain R & D, biotransformation, အထီးကျန် နှင့် သန့်စင် ခြင်း, ပစ္စည်း ပြုပြင်မွမ်းမံ အဖြစ် PHA-related နည်းပညာ ကွင်းဆက် အားလုံး ချိတ်ဆက် အတွက် ကြွယ်ဝသော နည်းပညာဆိုင်ရာ သိုက် နှင့်ဆက်စပ် ဉာဏ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို Fortune 500 ကုမ္ပဏီ များမှ ဖောက်သည် များက စစ်ဆေးပြီး ကုမ္ပဏီ များမှ အမှာစာ များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ကိုရရှိခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အပြာရောင် ဥပဒေ သည် PHA ၏ ကမ္ဘာ့စျေးကွက် ကိုစဉ်ဆက်မပြတ် ချဲ့ ထွ င်ရန် ကမ္ဘာတ ဝှမ်း ရှိ အဓိက နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများရှိ မိတ်ဖက် များနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် များကိုလည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Lanfa ကိုပူးတွဲ တည်ထောင် သူနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Dr. Zhang Haoqian က ဒြပ် ဇီဝဗေဒ ၏ ထုတ်ကုန် ဆန်းသစ် တီ ထွ င်မှု ကွင်းဆက် သည်အလွန် ရှည်လျား ပြီး Lanfa သည် PHA ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှင့်စက်မှု ထွန်းကား ခြင်းတွင် လုပ်ငန်းစဉ် အချက်အလက်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာ အတွေ့အကြုံ များစွာ ကိုစုဆောင်း ထားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ ကုမ္ပဏီ သည်ဤ အချက်အလက်များနှင့် အတွေ့အကြုံ များကို စက်မှု ၄. ၀ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း များဖြစ်သော အလိုအလျောက် နှင့် ဒီဂျစ်တယ် စနစ်ဖြင့် စုဆောင်း ပြီး ထုတ်ကုန် အသစ် များ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော် မှုတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုသည်။ အနာဂတ်တွင် အပြာရောင် ဥပဒေ ၏အဓိက ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်း ကိုဖွဲ့စည်း လိမ့်မည်။